स्थानीय Archives - मधेश प्रदेश डटकम
काठमाडौं, २६ पौष । स्थानीय निकाय पुनः कर्मचारीको जिम्मामा जान सक्ने भएको छ । २०७९ सालको सुरुमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दा चुनावको मिति तोक्नेबारे कुनै संकेतहरु देखिएको छैन । कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आएपछि नयाँ संकट देखिएको छ । यसकारण पनि चुनाव धकेलिनसक्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्नुपर्नेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइसकेको छ । कानुन...
रौतहट, १३ पुस । रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिई रहेका ७० बर्ष उमेर भन्दा माथिका बृद्ध बृद्धालाइ सम्मान गर्ने उदेश्यले नगर प्रमुख अजय कुमार गुप्ताले यस्तो अभियानको शुरुवात गरेको हो । सन्तानले आफ्नो बुवा आमालाइ बृद्ध अवस्थामा सम्मान गरोस भन्ने लक्ष्य लिएर अभियान शुरु गरेको नगर प्रमुख गुप्ताले बताएका छन् । गौर नगरपालिका वडा नम्बर ७ सिसवामा मंगलवार आयोजित जेष्ठ...
वीरगञ्ज, ११ पुष । आफ्नो घर र आँगनलाई आफैले सफा राख्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । वीरगञ्ज नर्सिङ् क्याम्पसमा ब्याचलर ईन नर्सिङ् साईन्सको दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत छात्राहरुले आयोजना गरेको वातावरण सरसफाई सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरुले घर र वातावरण सफा राखेमा धेरै रोग तथा महामारीबाट बच्न सकिने बताएका छन् । वीरगञ्ज नर्सिङ् क्याम्पसकी प्रमुख सूर्या कोईरालाको सभापतित्वमा सम्पन्न सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वीरगञ्ज युवा समाजका अध्यक्ष कमल चौगाईले स्वास्थय सबैभन्दा...
जलेश्वर, पुस ८ गते । महोत्तरीमा सामाजिक सुरक्षाको रकम बुझ्न गएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बैंकको लापरवाहीका कारण सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । दश नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको जिल्लामा एकल महिला भत्ता, बालबालिकालाई पोषणभत्ता, अपाङ्गता भएकालाई अपाङ्गता भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकमार्फत दिन थालिएको छ । भत्ता बुझ्न सास्ती भएको जलेश्वर नगरपालिका– ८ का वृद्ध बहादुर महराले बताए । बैंकले सेवाग्राहीलाई...
प्रदेश २ : घरायसी विवादमा श्रीमतीले चिर्पट प्रहार गर्दा श्रीमानको मृत्यु
सिरहा, पुस ८ गते । सिराहामा घरायसी विवादमा श्रीमतीले श्रिमानको हत्या गरेको छ । जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका– १४ मड्यानमा श्रीमतीले दाउराको चिर्पटले श्रीमानको टाउकोमा हान्दा गम्भीर घाइते भएका उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । गत मंगलबार अपराह्न घरायसी विवादका क्रममा श्रीमती ३७ वर्षीया हर्कमाया विश्वकर्माले चिर्पटले हान्दा अत्यधिक रक्तश्राव भई गम्भीर घाइते भएका करिब ४० वर्षीय टेकबहादुर विश्वकर्माको बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो । घाइते विश्वकर्मालाई एक दिनपछि उपचारका...
रौतहटमा ३ बर्षीय बालिकाको आगलगीबाट मृत्यु, २ बर्षीय बालक गम्भीर घाईते
अभिमनु कुमार पटेल, रौतहट, ६ पुस । आगलगीमा परी ३ बर्षीय बालिकाको मृत्यु र दुई बर्षको बालक गम्भीर घाईते भएको छ । फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नं १ बैरगनिया टोलमा बस्ने मदन रायकोको घर नजिकै सोही टोलमा बस्ने रामविश्वास राय यादवले आफ्नै खालि जग्गामा धान काटेर थुपारी राखेको धानमा आगलगी भएको थियो । गाउँकै बालबालिकाहरुले चिसोको मौसममा आगो सल्काई आगो खेल्ने क्रममा अचानक थुपारी राखेको धानमा आगो सल्कन लागि मदन...
सम्सी गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत यादवले किर्ते हस्ताक्षर गरेको खुलासा
महोतरी पुस ५ गते । महोतरीको सम्सी गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत संजय बाबु यादवले किर्ते हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । मंसिरमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका यादवले ४ महिना अगाबै सम्सीमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सिफारिस गरेको पाइएको छ । ०७८ अषाढ १३ गते मल बिक्रेताको लागि कृषि समग्री कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङ कोपोरेशन लि. जनकपुरलाई यादवले प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हस्ताक्षर गरी पत्रचार गरेको पाइएको छ । यादवले पत्रचार गरेको मितिमा...
गोलबजारमा पुनः पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध, अवस्था तनावग्रस्त
पुस ५ गते । सिरहाको गोलबजारको अवस्था पुनः तनावग्रस्त बनेको छ । प्रहरीले सहमति अनुसार २४ घण्टा भित्रै छुरा प्रहार गर्ने दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै स्थानीयबासिन्दाले गोलबजारमा आज बिहान १० बजेदेखि पुनः पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । राजमार्ग खोलाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि त्यहाँको अवस्था अहिले तनावग्रस्त बनेको हो । प्रहरीको लाठी चार्जबाट दुईजना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । सो क्रममा गाउँबाट भाटा, लाठी बोकेर आएका प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई लखेटेका...
वीरगञ्जको रानीघाटमा ट्राफिक सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम
वीरगञ्ज, १ पुष । साप्ताहिक ट्राफिक सचेतना अभियानअन्र्तगत आज वीरगञ्जको रानीघाटमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सयुँक्त आयोजनामा अभियान सुरु भएको हो । सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मुर्लीका अध्यक्ष रामकुमार सर्राफको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि वीरगञ्जको सडक विस्तार हुनुपर्ने बताए । अहिले मुआब्जाको कुरामा अल्झिएको...
प्रदेश २ : भारत पुर्‍याइएका २३ बालकको उद्धार
पर्सा, मंसिर २५ गते । प्रहरीले भारत पुर्‍याइएका २३ बालकलाई सद्धार गरेको छ । शुक्रवारमात्र २३ बालकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइएको छ । माइती नेपाल वीरगन्ज आवधिक गृह प्रमुख संगीता पुरीका अनुसार काठमाडौं, नुवाकोट, बाँकेलगायतका जिल्ला घर भएका १० वर्षमुनिका ती बालकलाई लामा (बौद्धधर्म) पढाउन भनी दुई जनाले भारतको बोधगया लग्न खोजेका थिए । बालकलाई लामा भेषभूषामै भारतीय सहर रक्सौलको रेल्वे स्टेसन एरियामा पुर्‍याइएपछि भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले जानकारी दिएपछि बालकहरुलाई फिर्ता ल्याइएको...
रौतहट १४ मंसिर । रौतहटका बन तस्करहरुले काठ चोर्न नयाँ जुक्ती निकाल्न थालेका छन् । तस्करले आफ्नो साईकलको स्वरुप परिवर्तन गरी काठ चोरी गर्न थालेका हुन् । बजारबाट नयाँ साइकल किनेर स्वरुप बदल्ने र रातभर जंगलमा लगेर गोलिया ओसारपसारमा प्रयोग गर्न थालेको वनले फेला पारेको हो । स्वरुप बदलेपछि साइकलमा मानिस चढेर हिड्न मिल्दैन । एउटा साइकलको बजार मुल्य ४÷५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसलाई स्वरुप बदल्न १ हजार रुपैयाँ जति थप लाग्छ ।...